Iphunga lembuzi kuseyilona iphunga lemali – Bayede News
Encwadini i-Eksodus 4:2 sithola uMose exoxisana
Elinye lamabhizinisi elikhulukazi kuleli Isithombe: Sithunyelwe
Encwadini i-Eksodus 4:2 sithola uMose exoxisana noNkulunkulu ngodaba lokukhipha abantwana bakwa-Israel besuka eGibhithe beya eKhenani. Emveni kwengxoxo ejulile, umbuzo awubuzayo uMdala wezinsuku uthi kuMose, “Ingabe uphetheni esandleni na?” Uyaphendula uMose uthi, “Yindukwana nje lena Nkosi.”
Le nduku kuMose kwabe kuyinto nje yokukhalima nokushaya izimvu ezazingezwa, kepha ebusweni bukaNkulunkulu kwabe kuyisikhali esabe sinzima kakhulu. Ekugcineni yiyo le ndukwana eyaphenduka inyoka enkulu yangwinya ezinye, yiyo futhi le ndukwana eyakhonjwa phezu koLwandle Olubomvu lwavuleka, yiyo futhi le ndukwana eyalethela abaseGibhithe izinhlupho ezilishumi, yiyo futhi le ndukwana eyakhonjwa phezu kwedwala ladabuka maqede kwaphuma amanzi aphuzisa isizwe sonke, nezinye izigameko eziningi kakhulu esingeziqede lapha.
Ububha, ukungabi bikho kwemisebenzi nokungalingani okukhona eNingizimu Afrika yisitha somAfrika. Kaningi uma umbuza umAfrika ukuthi idalwa yini le nhlupheko, ubika imbiba abike ibuzi. Uthi nxa uqalaza egcekeni ubone isithongwana sembuzi sigijima sedlula. Uphinde ubuze omunye umbuzo othi, yini lena na? Aphendule ngokuthi yisibhuzazana sami lesi.
INingizimu Afrika yaziwa njengezwe elincane emazweni akhiqiza izimbuzi emhlabeni. Amaphesenti kuphela amathathu uma uqhathanisa nomkhiqizo wembuzi e-Afrika jikelele. Okanti sikhiqiza ngaphansi kwephesenti elilodwa nxa siqhathaniswa namazwe omhlaba. Cishe amaphesenti angama-96 ezimbuzi zomhlaba zikhiqizwa emazweni asathuthuka. Uma sekukhulunywa ngokusebenzisa umkhiqizo wembuzi, isetshenziswa kakhulu cishe emazweni asethuthukile ngenxa yokuthi imikhiqizo evela embuzini efana nenyama kanye nobisi ikakhulukazi yaziwa njengenomsoco omkhulu ukwedlula eminye esigabeni senyama.
Yingakho kungamangalisi ukuthi le mboni yezimbuzi ithuthuka ngesivinini ngenxa yokuthi ukudingeka komkhiqizo kwedlula abantu abakwazi ukukhiqiza. INingizimu Afrika iyodwa nje isiphenduke indawo lapho abantu bamazwe afana noNamibia, iLesotho namanye bedayisela khona izimbuzi zabo. Ucashile lo mnotho wembuzi kwabaningi kangangokuthi isifundazwe iKwaZulu Natal sisodwa sithenga izimbuzi kwezinye izifundazwe nakwamanye amazwe cishe ezibalelwa ezinkulungwaneni ezingamashumi amabili nyanga zonke. Nxa ukubala lokhu ngokwemali esetshenziswa yilesi sifundazwe yevile esigidigidini ngonyaka. Akumangalisi ukuthi le mali njengoba iphuma esifundazweni inothisa ezinye izifundazwe namazwe afana noNamibia.
Ezinhlobeni ezahlukene zezimbuzi, singabala amaKalahari, amaGamanxa, nezimbuzi ezijwayelekile zasemakhaya. Ngokujwayelekile amaKalahari namaGamanxa eNingizimu Afrika anezinhlelo ezicacile eziqhutshwa abafuyi bazo. Yingakho kukhona izimakethe ezihlelekile zangaphakathi nangaphandle kwezwe lapho ziyiswa khona. Besekuthi uhlobo lokugcina okuthiwa yizimbuzi zasemakhaya, iningi lazo azinakho ukuhleleka ngendlela, kube kuyizo eziningi kakhulu futhi ezifuywa aboHlanga.
Okuhle ukuthi sekuyantwela ezansi maqondana nalesi simo, ikakhulukazi kwelikaMthaniya, kwazise ukuzihlela kwabantu bakhona nokulangazelela intuthuko nenqubekela phambili kulo mkhakha sekuyacaca. Engqungqutheleni yaMandla Omnotho eyabe ingoMfumfu nyakenye, kwaphonseleka inselelo kubafuyi naseMnyangweni ophathelene nezolimo KwaZulu Natal. Nebala bayithatha le nselelo ababekhona kubandakanya nalowo owayephethe ngaleso sikhathi uMnu uMthembu. Ukugovuza lolu hlelo kubandakanye umsebenzi omkhulu, ukubonisana nobuchule bokuwakha kube futhi kuvulwa namathuba ezimakethe zangaphandle nangaphakathi. Okubekuhle kakhulu ukuthi ekugcineni kubekhona impumelelo ehambisana nokuhleleka neseqophelweni eliphezulu kosomabhizinisi abathande ukuzibandakanya nalo mkhakha. Yize noma bekulindeleke ukuthi kuzuze izinkampani ezingamashumi amabili nanhlanu, kodwa eziyisishiyagalombili ezizuzile ngokohlelo lokuqala, zibonakale zenza kahle kakhulu ngesikhathi esincane nje.
Abahlomulile kulolu hlelo lwaMandla Omnotho obelubambisene noHulumeni wesifundazwe, abawuvali umlomo yinjabulo ehambisana nokuthuthukiswa kwabo ngezimbuzi. Okuhle kakhulu ukuthi bathole uqeqesho olusezingeni eliphezulu kakhulu ngokufuya izimbuzi, ukuqhuba ibhizinisi lezimbuzi, baze banikezwa nobuchule bethekhinoloji olungajwayelekile abazobusebenzisa ekuqhubeni amabhizinisi abo.
Okuhle kakhulu futhi ukuthi bakwazile ukuthi baqoke ikomiti elizomela ukuqhuba lo msebenzi KwaZulu Natal, kwizigaba ezilishuni nanye zokuhleleka kwesifundazwe, ngaphansi kukasoseshini obizwa ngeQhakaza. Ephawula olibamba lekomiti lesikhashana uMnu uSthembiso Gumbi ubeke ngokuthi “Sekufanele ukuthi njengabalimi bakwaZulu-Natal abathanda imbuzi, siqonde kabanzi ngayo, futhi sazi ukuthi iphunga lembuzi, yiphunga lemali.”
Njengosihlalo wenhlangano yabafuyi, umfo kaSomkhanda ukucacisile ukuthi besebenzisana naMandla Omnotho bazoqinisekisa ukuthi abantu abazimisele ukungena kule nhlangano bayabhaliswa ukuze kube khona izinhlelo ezicacile zokubathuthukisa. Ukuqhuba lo mnotho wembuzi bazimisele ukuzithuthukisa emazingeni wonke, ukuxuba ukufunda kabanzi ngemboni yonke yembuzi ngisho nezimbuzi zobisi. Okunye abafuna ukukwenza ukuhambela ngisho namazwe angaphandle ukuze bazifunele izimakethe, nokuthi kugcine inyama yembuzi isifana nazozonke izinyama ezidliwayo emakhaya nsukuzonke.
Sesifikile isikhathi sokuthi singavumi ukucabangisa okukaMose mhla umehlela lo mbuzo, ecabanga ukuthi akuphethe akunto etheni, kodwa kumele sazi ukuthi indukwana lena, iludondolo olungasifikisa kwelenyoni ngakwezamabhizinisi. Kusuka enyameni yembuzi, umquba, amathambo, isikhumba nobisi kuzobakhona izinhlelo ezihambisana nalokhu ukuze sithuthuke isizwe.